I-premium Dissertation ngumhlinzeki othembekile wezixazululo ezisuselwa kokuqukethwe zabathengi emhlabeni wonke. Kusukela ngo-2009. Siyaziqhenya ngokuba nabantu abanamakhono, abajabulisayo nabaqhutshwa yinhlangano yethu. Lokho kufaka abalobi bethu.singaqinisekisa ukuthi silandela ngesithembiso sethu...
Ukusakazwa kwezindaba ezaziwa kahle ngabathengisi bemakethe. Isetshenziselwa indlela evulekile nokuxaka, ibhizinisi, amandla nemvelo, ukuzijabulisa kwasekhaya nemidlalo, inqubomgomo yomphakathi kanye nentshisekelo.
Sikhethekile ekudaleni noma yiluphi uhlobo lwangaphakathi lwendawo ukusuka endaweni yokuhlala kuya kwezentengiso, ukusuka kwezokuthengisa kuya kumaphrojekthi wezimboni kusuka kumaphrojekthi wesilinganiso esiphansi kuya ekugcineni okukhulu. Senza ukwakheka kwezangaphakathi njengokuya ngesidingo sekha...
Sikhethekile ekudaleni noma yiluphi uhlobo lwangaphakathi lwendawo ukusuka endaweni yokuhlala kuya kwezentengiso, ukusuka kwezokuthengisa kuya kumaphrojekthi wezimboni kusuka kumaphrojekthi wesilinganiso esiphansi kuya ekugcineni okukhulu. Singumklamo wezangaphakathi njengokuya ngesidingo seklayenti...